सामाजिक सुरक्षा योजनाको दुई वर्ष : भयो त नयाँ युगको सुरुआत ? - Kohalpur Trends
११ मंसिर, काठमाडौं । ११ मंसिर २०७५ मा काठमाडौंका बिजुलीका पोल–पोलमा झुण्ड्याइएको प्रधानमन्त्रीको फोटोमुनी लेखिएको थियो– एउटा नयाँ युगको सुरुआत । सरकारले त्यस्तो तामझमका साथ ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷०१८ का अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या कुनै न कुनै रोजगारीमा छन् । यसमा ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० हजार महिला छन् । सर्वेक्षणअनुसार १५.४ प्रतिशत औपचारिक र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन् ।
कोषले बुढौलीमा पेन्सन दिने भनेको छ । बिद्यमान व्यवस्थाअनुसार योगदानकर्ताको न्यूनतम तलबको ३१ प्रतिशत मासिक रुपमा जम्मा हुन्छ । यसमध्ये २८.३३ प्रतिशत ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’को पेन्सनमा खर्च हुन्छ । बाँकी रकम औषधोपचार, सुत्केरी खर्च दुर्घटना बीमा लगायतका सुविधामा जान्छ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार कामदारले जम्मा गरेको कुल योगदान रकममा सरकारले दिने निश्चित प्रतिफल जोडेर आएको रकममा कुल योगदान गरेको महिना (न्युनतम १८०) ले भाग गरेर आएको रकम मासिक रुपमा पेन्सनका रुपमा पाइनेछ ।
प्रश्न उठाइएको छ– कामदारले जम्मा गरेको रकमको ब्याज त पेन्सन पाउलान्, सावाँ चाँही खोई ? सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सावाँ गायब हुने योजना भनेर रोजगारदाताले नै प्रचार गराएका छन् ।
श्रेष्ठले कोषको नेतृत्व, सञ्चालन र नियमन गर्ने श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भूमिका पनि योजना लागू गर्नेतर्फ उन्मुख नदेखिएको बताए । ‘श्रम मन्त्रीज्युले सामाजिक सुरक्षा योजना नै बुझ्नु भएन कि जस्तो लाग्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कोषमा आवद्ध हुन रोजगारदाताहरुलाई प्रोत्साहन, निर्देशन र व्यवस्थापन गर्ने काम किन हुन सकिरहेको छैन त ?’
Previous Previous post: महामारीका बेला विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने ?
Next Next post: २२ वर्षकी युवती जसले आफ्नो खुट्टाको फोटो बेचेर महिनामा साढे १२ लाख कमाउँछिन्